ဘယ်လို blockchain နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးပါဘူး 2018? - Blockchain သတင်းများ
နီးပါးဆယ်နှစ်အကြာကလူပထမဦးဆုံး blockchain နည်းပညာအကြောင်းကိုအထဲကရှာတွေ့. ထိုကတည်းက, ကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ကိုယ်စားလှယ်များ၎င်းတို့၏လယ်ကွင်းထဲမှာများအတွက်အသုံးပြုမှုကိုရှာတွေ့မှဒီနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြ. ထို့အပြင်, အများဆုံးထူထောင်ကုမ္ပဏီများသည်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ငန်း Ethereum မဟာမိတ်အဖြစ်မဟာမိတ်ဖွဲ့သို့ပေါင်းစည်းကြသည် (Eee), R3, နှင့် Hyperledger စီမံကိန်း, အသစ်က blockchain-based ဖြေရှင်းနည်းများကိုဖန်တီးရန်. ကျနော်တို့အတွက် blockchain ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ကျွမ်းကျင်သူထင်မြင်ချက်များမျှဝေချင် 2018, နှင့်ကုမ္ပဏီများမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်အတွက်နည်းပညာအသစ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်စီစဉ်လျက်ရှိသည်ရာ.
Forbes မဂ္ဂဇင်း blockchain ကဤသို့ဆိုအဖြစ်အလုပ်ရှင်များကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအကဲဖြတ်ရန်လမ်းကိုများအတွက်ကျယ်အထိသက်ရောက်မှုရှိသည်နှင့်နေရာလွတ်ဖြည့်ပါလိမ့်မယ်. တွင် 2018, APPII ဆင်တူစျေးကွက်အပေါ်အများကြီးပလက်ဖောင်းရှိလိမ့်မည်, ရာနှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုထောက်ပံ့ “စမတ်” အဆိုပါ blockchain network ပေါ်မှာ profile များကို. မသာ, ဤ profile များကိုအသုံးပြုသူများအ CVs ဆံ့ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတန်ရာနှင့်အောင်မြင်မှုများအကြောင်းကိုသတင်းအချက်အလက်, ယှဉ်ပြိုင်ပညာရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များနှင့်အခြားမည်သည့်အရေးပါသောအအချက်အလက်များ၏လက်မှတ်များ. အပြင်, ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အလုပ်ရှင်များဤအချက်အလက်အတည်ပြုပေးရန် profile များကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်, ထိုသို့သောအားဖြင့်ကအပြည့်အဝယုံကြည်စိတ်ချရသောအောင်.
သုတေသနနှင့်တိုင်ပင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက - - IDC မှကနျြးမာရေး Insights ကနေမကြာသေးခင်ကအစီရင်ခံစာလာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း blockchain နည်းပညာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအများအပြားဒေသများအတွက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြု. လေ့လာမှု “ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစက်မှုလုပ်ငန်း 2018 ကမ္ဘာ့ခန့်မှန်းချက်” နောက်နှစ်ကခန့်မှန်းထားသည် 20% အဖွဲ့အစည်းများ၏တက်ကြွစွာ blockchain စီမံကိန်းများဖွံ့ဖြိုးဆဲကြလိမ့်မည်. အားဖြင့် 2020 blockchain လုပ်ငန်းလည်ပတ်စီမံခန့်ခွဲမှုများတွင်အသုံးပြုပါလိမ့်မည်, အဖြစ်လူနာ databases ကိုထိန်းသိမ်းဘို့. အဆိုပါ Skycell ကုမ္ပဏီဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုထိရောက်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပူဇော်ဘယ်လို blockchain နှင့် IoT တစ်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဥပမာဖြစ်ပါတယ်, အရာငွေပေးချေမှုလည်းပါဝင်သည်, ငွေတောင်းခံ, နှင့်အာမခံ.
အဆိုပါ Blockchain Research Institute မှစီမံကိန်း၏တစ်ချိန်တည်းသင်တန်းသားများမှာ, IBM ကပါဝင်သည်ရာ, Pepsi Co. ,, နှင့် FedEx, ကြောင်း blockchain ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အကောင်အထည်ဖော်မျှော်လင့်ထား, ရုံကျောင်းအုပ်ကြီးတူရိယာဖြစ်လာမည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ဒစ်ဂျစ်တယ်တော်လှန်ရေး၏ဒုတိယမျိုးဆက် embody ပါလိမ့်မယ်, ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းကအင်တာနက်များ၏တီထွင်မှုဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ. Foxconn ကကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်အတွက်အရောင်းအစောင့်ကြည့်ဖို့ blockchain ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်.
LOOMIA ရှောလုသည် Lederer မှာ Blockchain ညွှန်ကြားရေးမှူးအတွက်ယုံကြည်သည် 2018 ကျနော်တို့ဘယ်လိုတည်ထောင်သည့်ကုမ္ပဏီများမြင်ရပါလိမ့်မည်, ပြီးသားအမျိုးမျိုးသောစျေးကွက်များတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသက်သေပြနိုင်ဖို့စီမံခန့်ခွဲပြီ, အများပြည်သူ blockchain အပေါ်အခြေခံပြီးရှေ့ပြေးန်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်.
စတင်တည်ထောင်သည့်ကုမ္ပဏီများ 90 ကျော်အတွင်းအင်တာနက်လျစ်လျူရှုကြောင်းအဖွဲ့အစည်းများက်ဘ်ဆိုက်စတင်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြသည်မည်သို့အလွန်သိမှဖြစ်ကြသည်, သူတို့အလားတူ blockchain နည်းပညာ၏ဆိုက်ရောက်နှင့်အတူ blindsided ခံရဖို့မလိုချင်ကြဘူး. သူတို့ကတစ်ဦး blockchain နှင့်အတူစမ်းသပ် start တစ်ခုသို့မဟုတ် Blockbuster ၏လမ်းကိုသွားမယ့်တစ်ခုခုကိုအသိအမှတ်ပြုရန်.
blockchain မှကျေးဇူးတင်ပါသည်, စမတ်ကန်ထရိုက်များအသုံးပြုမှုများလွန်းကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်. ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကအိုင်တီကုမ္ပဏီကြီး IBM က, အမေရိကန်အာမခံကော်ပိုရေးရှင်း AIG, နှင့်ဘဏ္ဍာရေးကုမ္ပဏီ Standard Chartered ဘဏ်ဟာ PLC blockchain-အခြေပြု၏ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်ပြီးစီး “စမတ်” အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာမခံပေါ်လစီသည်. ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ blockchain နှင့်စမတ်ကန်ထရိုက်ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်, နောက်ထပ်တစ်ဦးကြီးမားသောအတိုင်းအတာပေါ်မှာဤစီမံကိန်းကိုဖွံ့ဖြိုးတံ့သော 2018. အိုလီဗာ Bussmann blockchain ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အာမခံလုပ်ငန်းကဏ္ဍသာပြောင်းလဲနေတဲ့ကြောင်းသေချာပေမယ့်တခြားစက်မှုလုပ်ငန်း impact ပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဥ်း, လာမည့်နှစ်တွင်ကုမ္ပဏီအများအပြားသစ်ကိုစျေးကွက်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်များလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်.
အလယ်အလတ်ပေါရာဏဖြစ်လာကြပြီတဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ, ကုမ္ပဏီများအ Silo များအတွက်စဉ်းစားရပ်တန့်ဖို့သင်ယူနှင့်ဂေဟစနစ်တွင်သို့မဟုတ်ပိုမိုကျယ်ပြန်ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်မိတ်ဖက်ဖြစ်လာဖို့ပိုပြီးပွင့်လင်းဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်. ထို, တစ်ပြန်တစ်လှည့်, ကပလက်ဖောင်းပြဇာတ်ရဲ့ရှိမရှိ - အဘယ်အရာကိုသူတို့လိုချင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်မျိုးစုံဆုံးဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများ, ထုတ်ကုန်ပြဇာတ်, Omni-ရုပ်သံလိုင်းမဟာဗျူဟာများ, နောက် ... ပြီးတော့.
အိုလီဗာ Bussmann - UBS မှာမဟုတ်-များအတွက်အကျိုးအမြတ် Crypto ချိုင့်အစည်းအရုံးဟောင်း CIO ၏ဥက္ကဋ္ဌ - ပိုကြီးတဲ့ဘဏ် blockchain ငွေပေးချေမှုစနစ်များကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်ဟုမှတ်ချက်ပြု, သူတို့ကို real-time အပြောင်းအလဲနဲ့၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဆောင်တတ်၏ blockchain အားသာချက်များစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံနေကြသောကြောင့်,, အနိမ့်အန္တရာယ် profile များကို, အနိမ့်စရိတ်နှင့်မြင်သာ. အဆိုပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကိုလည်းအတွက်ကပြောသည် 2017, သူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ရခဲ့တယ်ကုမ္ပဏီများဖွ blockchain ကြောင်းန်ဆောင်မှုများသစ်ကိုမျိုးရန် ပို. ပို. အာရုံစူးစိုက်မှုပေးဆောင်ခဲ့, IoT နဲ့ AI တွေနဲ့ပေါင်းစပ် blockchain အထူးသဖြင့်လျှင်. Bussman အဆိုအရ, ဒီလမ်းကြောင်းသစ်အတွက်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် 2018, Forbes မဂ္ဂဇင်းထဲမှာမကြာသေးခင်ကအစီရင်ခံစာအဖြစ်ကောင်းစွာဤသို့ဖော်ပြသည်အဖြစ်. blockchain ၏ encrypt လုပ်ထားနှင့်ကျတ်သဘောသဘာဝ IoT အပေါ် devices များရဲ့အစဉ်အဆက်-တိုးပွားလာစောင့်ကြည့်ဘို့အလွန်အသုံးဝင်သည်. ထို့ကြောင့်, အစီရင်ခံစာသတ္တုတူးဖော်ရေး Bitcoin များအတွက်အသုံးပြုသောကွန်ပျူတာပါဝါကိုမျိုးဆက်သစ်များ၏ဆိုက်ဘာ-ဓားပြများထံမှစမတ်အိမ်တွေကိုကာကွယ်ရန်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြု.
နျူကလိယ Vision ၏၏ CEO ဖြစ်သူ, Abhishek Pitti အားကောင်း data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်ကူညီပေးပါမည်သည့် blockchain ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဖော်ပြထားတယ်. သူအတွက်ကယုံကြည်သည် 2018, ဒီဧရိယာ cryptography ကိုကဲ့သို့သောနည်းပညာများ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဖှံ့ဖွိုးတိုးကနေအများဆုံးသိသိသာသာအကျိုးခံစားခွင့်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်, encryption ကို, နှင့် blockchain:
Blockchain အများအပြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အပြုသဘောပြောင်းလဲမှုကိုဆောင် ခဲ့. နိုငျသောအစွမ်းထက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်, ကျနော်တို့ encryption ကိုနည်းပညာနှင့် cryptography ကိုအတွက်တိုးတက်မှုကြောင့်မြော်, blockchain နှင့်အတူ coupled, အတွက်လုံခြုံရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အောင်မြင်မှုများအတွက်စာရွက်ဖြစ်လိမ့်မည် 2018. ဥပမာအားဖြင့်, အဆိုပါ Equifax data တွေကို hack ကယ့်ကြောင့်တားဆီးဖို့ blockchain ထက်ပိုပြီးလိုအပ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်. blockchain နည်းပညာကိုတကယ်ဖောက်သည်ကုမ္ပဏီကပိုင်ဆိုင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်အခိုင်အမာကူညီပေးခဲ့နိုင်ပေမယ့်, မကောင်းတဲ့လုံခြုံရေးအလေ့အကျင့်အားနည်းချက်သူတို့ကိုထားခဲ့မယ်လို့, အတူသို့မဟုတ် blockchain မပါဘဲ. blockchain ရဲ့လုံခြုံရေး features တွေကိုတကယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သို့ရောက်ရလိမ့်မည်ဘယ်မှာ IoT နှင့်အတူ၎င်းတို့၏နားချင်းဆက်မှီ၌ဖြစ်လိမ့်မည်. ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းတွေတစ်ခုအမြဲတိုးပွားလာမှုနှင့်အတူ, 2018 ခေတ်မီဆန်းပြားဒေတာပြိုပျက်ရာကနေ IoT applications များနှင့်သုံးစွဲသူများကိုကာကွယ်ရန် blockchain ၏လုံခြုံရေးဗိသုကာလိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ကျွန်မပြင်းပြင်းထန်ထန်ယုံကြည်ကြသည် 2017 ကြွလာတော်မူသောအရာများအတွက်သာနောက်တွဲယာဉ်ခဲ့သည် 2018 တစ်ခုလုံးကို blockchain ဂေဟစနစ်များနှင့်ကဏ္ဍကိုဖြတ်ပြီး.
dmitriy Zhulin, INS ဂေဟစနစ်၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ, blockchain အတွက်ကျယ်ပြန့်လက်ခံကျင့်သုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းနည်းပညာဖြစ်လာကြည့်ဖို့မျှော်လင့် 2018, ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့်လက်လီထံမှစက်မှုလုပ်ငန်းများတစ်ခုလုံးအိမ်ရှင်ပြောင်းလဲ, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆေးဝါးမှ. တစ်ချိန်တည်းမက် Kordek မှာ, Lisk ကုမ္ပဏီပူးတွဲတည်ထောင်သူ, ကျနော်တို့အတွက် blockchain ကွန်ယက်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးတွင်အများအပြားဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမြျှောလငျ့နိုငျကယုံကြည်သည် 2018, ကွန်ယက်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်နှင့်စပ်လျဉ်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချဘို့အသစ်ကိုသဘောတူညီမှုယန္တရားများနှင့် updated အခြေခံမူများပါဝင်သည်တံ့သော:
Bitcoin ရဲ့အသုံးပြုသူ activated ဖျချိတ်နှင့်အတူ (UASF), သို့မဟုတ် Lisk ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့-သက်သေပြချက်-of ​​လောင်းကြေးသဘောတူညီမှုယန္တရားများ, ကျွန်တော်တစ်ဦးစီမံကိန်းအနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်. အရေးပါဆုံးဖြတ်ချက်များအောင်ကူညီအနာဂတ်ဖြေရှင်းချက်မြျှောလငျ့နိုငျ. အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုများ၏ပြဿနာသို့ဆက်လက်အခြားပူခေါင်းစဉ်ဖြစ်လိမ့်မည် 2018. ငွေပေးငွေယူထိုကဲ့သို့သောနိုင်ရန် VISA သို့မဟုတ် Mastercard အဖြစ်အစဉ်အလာပြိုင်ဘက်များကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အမြန်နှုန်းနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာလက်ရှိ blockchain မူဘောင်နေဆဲနောက်ကျကျန်ရစ်နေကြပါတယ်. အဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းသစ်ကိုဖြေရှင်းချက်ရှာဖွေတုန့်ပြန်၏ယှဉ်ပြိုင်မှုအဆင့်ဆင့်အောင်မြင်နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာအမှတ်ကုဒ်ပိုကောင်းအောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. ဤသည် Lisk sidechains အကောင်အထည်ဖော်နေသည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ကောင်းမွန်စွာဖြန့်ဝေကွန်ရက်လှုပ်ရှားမှုသေချာနှင့်ကွန်ယက်ပေါ်မှအပြောင်းအလဲနဲ့မြန်နှုန်းပိုမိုကောင်းမွန်စေမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်.
Blockchain နည်းပညာတိုးချဲ့ခြင်း 2018
Previous Post:အတွက် Cryptocurrency စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း 2018
Next Post:၏အရေးအပါဆုံးဖြစ်ရပ်များ 2017 အဆိုပါ Crypto အဝန်းထဲမှာ
Bitcoin အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေး၏စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ် ?
Natalya Kaspersky ၏မြင်ကွင်းကို၏အချက်: Bitcoin isaProject of
How Cryptocurrency Mixers and Anonymous Wallets Work The paradox of bitcoin is